Ahoana no ahafahantsika mamorona rindran-dalana mora amin'ny 2019?
Ny fitadiavana maimaim-poana dia mety henjana sy mampatahotra, indrindra ho an'ireo tanora manam-pahaizana tsy manana traikefa. Ity sora-baventy ity dia ahitana teknika maro samihafa, statistika, fitaovana, programa ary algorithm updates. Ankoatra izany, ny marketing ara-nomerika dia tsy misy toeram-pivarotan-tsakafo. Mihabetsaka hatrany ny fisehoan-javatra any amin'ity sehatra ity isan'andro, ary sarotra ho an'ny manam-pahaizana koa ny manohy ny fampahalalam-baovao rehetra. Na eo aza ny fahasahiranana rehetra dia misy fomba tsotra ahafahana mieritreritra momba ny SEO. Ity dingana ity dia ahitana singa telo mifandray sy mifandray izay mampitombo ny fifamoivoizana. Ireo singa ireo dia ahitana - votoaty, rohy tafiditra ary media sosialy. Ny fampiharana ireo teknikam-pamokarana amin'ny fomba marina, dia ho mora aminao ny hahazo rindran-taratasy amin'ny 2019. Mila mandinika tsara ireo dingana telo fanatsarana rehetra ireo ianao raha ilaina ho an'ny fampielezan-kevitra SEO rehetra mba hahomby. Raha tsy nahavita dingana iray farafahakeliny ianao, dia hiafara amin'ny pejy faha-10 faha-10 amin'ny SERP miaraka amin'ny fiakaran'ny fifamoivoizana ambany indrindra.
Alohan'ny hanombohan-dresaka ireo singa fototra telo ireo, dia misy zavatra vitsivitsy azo takarina mikasika ny fomba fiasan'izy ireo ao amin'ilay trano.
Fifandraisana mifandraika amin'ny SEO
Zava-dehibe ny manana votoaty, backlinks ary media sosialy tahaka ny ao anaty trano dia mamorona fandraisana andraikitra mahomby. Ho fanamafisana ny kalitaon'ny tranonkala sy ny fanamafisana ny tranokala, dia tsy afaka miala amin'ny iray amin'ireo singa ireo ianao raha mandroso ny paikady fanavaozana dia mitaky ny mazoto any amin'ireto faritra telo ireto. Ankoatra izany, ny tsirairay amin'ireo singa SEO ireo dia manamafy ny hafa. Raha misy singa iray, e. h. , ny votoaty dia novonoina tamin'ny fomba mahitsy, singa roa hafa (valiny sy media sosialy) dia mety hitondra valisoa amin'ny loharanon'ny tranonkala. Ny fanaovana fitetezana fikarohana amin'ny fomba tsara dia ny tonon'ny asa aorian'izay sy saintsainina. Tsy afaka manao ny fametahana ianao ao anatin'ny fanentanana fanentanana anao satria miteraka vokatra mampidi-doza eo amin'ny tranokalanao SEO izany ary manimba ny ezaka ataonao any amin'ny faritra hafa fanatsarana. Soa ihany fa afaka manondro ireo manampahaizana ao amin'ny SEO ianao. Samy afaka manampy anao hifanaraka amin'ny tanjon'ny orinasa ireo mpikirakira aterineto sy ireo manam-pahaizana SEO.
Noho izany, andeha hodinihintsika ireo singa SEO telo izay tena manan-danja tokoa ho mora amin'ny fahazoana bakolazo amin'ny 2019.
1. Ny votoatin-kevitra
Ny votoatiny dia singa fototra iray voalohany amin'ny fanentanana fanentanana raha mbola mbola mpanjaka ny votoatiny. Izy io dia misy fiantraikany mivantana amin'ny traikefan'ny mpampiasa amin'ny tranokalanao ary mampiseho ny asanao eo amin'ny sehatry ny indostria. Ny vohikala rehetra dia afa-po fa ny mason'ny fikarohana ihany no afaka mijery, io votoaty io dia antsoina hoe meta votoaty. Izany no antony ilainao mba hahazoana antoka fa tsy mamorona afa-po sy hatsarana fotsiny ianao fa manatsara ihany koa ny metadata toy ny URL, lohateny, famaritana, lohateny, ary robots. TXT.
Na dia mety manana tranonkala tsara tarehy sy tsara natao aza ianao, dia tsy vita amin'ny fikarohana karazana fikarohana. Bilaogy iray dia mety ho fandraisana anjara tsara amin'ny tranokalan'ny SEO tranonkala. Manoro hevitra mafy anao aho mba tsy hanao tsinontsinona ny blaogy fa ny votoatin'ny kalitao dia manintona ireo mpampiasa amin'ny fikarohana ary mahatonga azy ireo lalindalina kokoa ao amin'ny pejin'ny tranonkala.
Raha te ho mpitoraka bilaogy tsara ianao ary manintona mpanjifa vaovao amin'ny pejy tianao, dia mila manaraka ny dingana manaraka ianao:
Manangana zavatra vaovao vaovao
Mila mamoaka lahatsoratra vaovao ao amin'ny pejin'ny blôginao ianao mba hampiseho ireo fitaovan'ny fikarohana fa ny tranonkala dia mavitrika ary velona. Ny vaovaon'ny blôginao matetika, ny valiny tsaratsara kokoa azonao avy amin'ny Google. Izany no antony tokony hitazomanao ny blôginao.
Omeo mpampiasa manana angona mahasoa
miankina mivantana amin'ny isan'ny mpamaky anao. Izany no antony ilanao ny mijery manokana ny hatsaran'ny votoaty azonao am-bilaogy. Ny mpampiasa dia tsy te handany fotoana hamakiana ny votoaty tsy manan-tsahala, tsy misy dikany ary tsy misy vidiny. Mila mampiditra azy ireo amin'ny zavatra iray tsy manam-paharoa sy haingam-pandeha ianao. Ny votoatinao dia tokony ho tsara indrindra mba hahafahan'ny mpamaky hizara izany.
Ny tetika fitorahana finday dia ahitana ny bilaogy vahiny, famoahana famoahana gazety, fanehoan-kevitra, ary taktika hafa mifandraika amin'ny rohy.
Ny fanorenana ny rohy dia manan-danja ho an'ny fanavaozana ny marika sy ny fampiroboroboana satria ny motera fikarohana dia manaiky ny toerana misy anao sy ny lazanao mifototra amin'ny karazana tranonkala mifandray aminao. Ny loharanon'ny tranonkala avo lenta kokoa mampifandray anao, ny avo indrindra dia hamaritra ny pejy valin'ny fikarohana. Mba hahazoana ny ranom-boankazo tsara tarehy avy amin'ny tranonkala manerantany, tokony hanana tranonkala tsara ianao miaraka amin'ny votoatiny sy manan-danja ary laza tsara eo amin'ireo mpampiasa.
Mba hahitanao loharanom-baovaon'ny loharanom-baovao ao anatinao, dia mila manao fikarohana ianao ary mahita blôgy sy vohikala mifandray amin'ny momba anao ary mamela ny famaliana. Avy eo dia mila mifandray amin'ireto tranonkala ireto ianao ary manontany azy ireo momba ny fahafahana rohy ho anao. Ataovy azo antoka fa manorina rohy dofollow ianao raha toa ka ity karazana backlinks ity ihany no ahafahanao mitondra jiro sarobidy amin'ny tranokalanao. Tsy misy tranokalam-pifaneraserana amin'ny fikarohana raha tsy misy tranonkala hafa mifandray aminy.
Ndeha isika hifanakalo hevitra hoe inona no fomba tsara indrindra hahazoana rindran-damba tsara amin'ny tranokalanao:
) Ny fomba ahafahanao mahazo rohy amin'ny alàlan'ny fitorahana blaogy, efa nosoriko ato amin'ity lahatsoratra ity. Izany no safidy tsara indrindra hanamboarana rohy raha tsy mahalana loatra ny fikarohana toy ny spam. Ankoatra izany, fahafahana tsara ny mifandray amin'ny mpihaino anao ary manintona mpanjifa vaovao ho an'ny marikao.
Ny famoronana fanontana gazety dia fomba tsotra hanatsaranana ny fanentanana ny marika ary milaza amin'ny olona ny momba ny novolavolainao sy ny fanovana. Ny zavatra rehetra ilainao dia ny mamolavola tononkalo malaza amin'ny zavatra mahatalanjona ao amin'ny orinasa ary manolotra izany amin'ny orinasam-pizaràna famoaham-baovao.
Ny fomba voajanahary hahazoana ny sira mifandraika amin'ny kalitao dia ny hamoronana votoaty sarobidy izay hizaran'ireo mpampiasa sy ny tiany. Ny fanalahidin'ny fahombiazana dia ny famoahana fitaovana miavaka mifototra amin'ny fikarohana arahin'ny infografika amin'ny fotoana tsy tapaka.
Azo ampiharina amin'ny loharanon-kevitra ara-barotra ny loharanon-tranonkalanao satria mbola betsaka ny olona mitady fika ireo fikambanana takiana amin'ny alalan'ireo tatitra ireo. Ny rohy avy amin'ny loharano azo raisina dia hanampy amin'ny fanatsarana ny laharan'ny toerana, koa aza manadino ny vintanao. Betsaka ny tolotra ao amin'ny tranonkala izay manome ny tompona tranokala miaraka amin'ny fahafahana manangana rohy amin'ireo tatitra lehibe ao an-toerana.
Afaka mahazo tombontsoa avy amin'ireo mpifaninana nichey niche izay efa nanangana ny ezaka nataony tamin'ny fanorenana rohy
. Voalohany indrindra, mila manadihady ny fifaninanana ianao ary mamantatra ny rivodoza TOP5 anao. Avy eo dia fantaro ny rohy misy ny mpifaninana aminao sy ny loharano avy amin'ireto rohy ireto. Jereo ny mpifaninana aminao mifandray amin'ireo mpanolotra sy manontany azy ireo momba ny fifandraisana amin'ny orinasanao.
3. Ny haino aman-jery sosialy
Ny mavitrika amin'ny haino aman-jery sosialy dia ny tapakilanao mankany amin'ny toerana avo indrindra amin'ny SERP. Ny haino aman-jery ara-sosialy amin'izao androntsika izao dia ampahany manan-danja amin'ny fanatsarana ny fikarohana. Amin'ny alalan'ny fampahalalam-baovao sosialy, afaka mifandray amin'ny mpanjifanao ianao ary mametraka fifandraisana am-pirahalahiana. Ny famelana ny tiana sy ny tolotra maro dia afaka manamboatra ny fahefan'ny pejy, noho izany ny toerany, ka mahatonga ny fifamoivoizana ara-tsosialy bebe kokoa amin'izany.
Tadidio ireto soso-kevitra manaraka ireto raha ny fitantanana ny fampielezan-tserasera amin'ny tambajotra sosialy:
Raha mametraka ny marika amin'ny iray amin'ireo sehatra media sosialy malaza ianao Google+, Facebook na Twitter, mila miasa eo ambaniny isan'andro ianao. Tsy ampy ny hamoaka lahatsoratra indray mandeha isan-kerinandro raha ho lasa sangisangy haingana ireo mpanara-dia anao. Noho izany, raha te hahomby amin'ny sehatra sosialy ianao, dia mila manome ny mpanaraka anao amin'ny lahatsoratra isan'andro momba lohahevitra sy fanadihadiana ary fifaninanana mahafinaritra. Ilainao ny mampiasa ny fomba rehetra azo atao mba hifandraisana amin'ny mpihaino anao sy hahatonga azy ho mahatoky amin'ny marikao.
Fikarohana ireo nichesin'ny fiaraha-monina izay manan-danja amin'ny indostria misy anao. Mazava ho azy fa tsy maintsy mamorona ny kaonty momba ny raharaham-barotra ao amin'ny Facebook, Instagram ary Twitter ianao, fa ireo sehatra ireo kosa dia ampahany amin'ny tranonkala sosialy misy anao. Ara-dalàna ny mikaroka vohikala sosialy hafa izay manompo ireo mpanjifa manana tanjona.
Ireo singa telo nofaritako ato amin'ity lahatsoratra ity (votoatin'ny tranokala, fampiroboroboana ny media sosialy) dia tena ilaina amin'ny fampiroboroboana ny orinasa amin'ny 2019. Azo atao ny fahombiazan'ny SEO, saingy tsy hoe tsy misy ny singa fototra rehetra atolotra sy araka ny tokony ho izy. Amin'izao fotoana izao, sarotra ny manamboatra milina fikarohana ary ambony kokoa ny andaniny amin'ny tricks malaza. Izany no mahatonga anao hampiasa ny fotoananao sy ny ezaka amin'ny fananganana fanentanana tsara fanentanana. Ho vokatr'izany dia hahazo fiverenana ambony amin'ny fampiasam-bola ianao.
Mila manana fomba fijery matotra momba ny fanentanana fanatsarana ianao ary hanangana drafitra izay mila mifototra amin'ny fanorenana rohy ivelany avy amin'ny loharanom-pahefana ao amin'ny fonon-tananao, mamorona votoatin'ny hatsarana sy fikarohana mifototra amin'ny fanatsarana sy ny habetsahana fanalahidy, ary farany mamorona fanatanjaham-piaraha-monina matanjaka toy ny ankamaroan'ny mpanjifanao mety hampiasa ny tambajotra sosialy isan'andro.
Raha toa ka miantoka tsara ny fanatsarana ny atianao (tranonkala mifintina, fifandraisana, marketing, votoatin'ny fikarohana, metadata fanatsarana) dia mihodina tsara; Manana fanentanana fananganana rindrambaiko mahomby sy manangona ianao ary mampiroborobo ny marika eo amin'ny sehatry ny media sosialy ianao, hahomby amin'ny orinasan-tserasera Source .